Mumwe munyori wemabhuku eChirungu Jonathan Swift akanyora kuti: “Zvitendero zviri kuita kuti vanhu vavengane panzvimbo pokudanana.”
SWIFT akataura mashoko aya muzana remakore rechi18, uye nhasi vakawanda vanobvumirana nezvaakataura. Vamwe vanototi vabereki havafaniri kupiwa kodzero yokudzidzisa vana vavo nezvaMwari. Vanofunga kuti vana vanenge vakarererwa mumhuri dzinovadzidzisa zvechitendero vanokura vasingazivi zvinhu zvakawanda.
Unoti kudii nazvo? Pane zvinotevera, ndezvipi zvaunofunga kuti zvine musoro?
● Vabereki havafaniri kubvumirwa kudzidzisa vana vavo nezvaMwari.
● Vabereki vanofanira kumbomirira kuti vana vavo vatange vakura vozovadzidzisa zvechitendero.
● Vana pavanenge vachiri vaduku, vabereki vanofanira kuvadzidzisa zvavanotenda ivo nezvaMwari. Asi vana vavo pavanenge vachikura, vanofanira kuvakurudzira kuti vazvionere pachavo kuti ndicho chokwadi.
● Vana vanofanira kungotenda zvinotaurwa nevabereki vavo nezvaMwari pasina kumbotsvaka kuti ndizvo here kana kuti kwete.
Chitendero Chinokanganisa Vana Here?
Hapana mubereki ane hanya anoda kukanganisa mwana wake. Asi zvinotaurwa nevanhu ava vanoti vana havafaniri kudzidziswa nezvaMwari zvine musoro here kana tichizvienzanisa netsvakurudzo dzakaitwa? Kwemakumi emakore, vaongorori vanga vachitsvakurudza zvakadzama kuti chitendero chomubereki chingapedzisira chaita kuti mwana wake ave munhu akadii. Vakawanei?
Vanotsvakurudza vakaona kuti panzvimbo pokukanganisa mwana, chitendero chinotoita kuti akure ari munhu kwaye. Muna 2008, nyaya yakabudiswa mune imwe magazini inotsvakurudza nezvemagariro evanhu inonzi Social Science Research * yakati: “Zvakaonekwa kuti chitendero chinotobatsira kusimbisa ukama huri pakati pomwana nomubereki.” Nyaya yacho yakataurawo kuti: “Zvinoita sokuti chitendero uye kuziva zvinofanira kuva pokutanga muupenyu ndizvo zvinoumba upenyu hwevana vakawanda uye zvinoitawo kuti pave noukama hwakasimba mumhuri.” Ona kufanana kwakaita tsvakurudzo iyi nezvakataurwa naJesu zvokuti: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.”—Mateu 5:3.
Zvakadini nepfungwa yokuti vana vanofanira kumboregwa vachikura vozodzidziswa nezvaMwari uye zvechitendero pave paya? Mafungiro aya haasi echokwadi kana tichifunga nezvokuti: Pfungwa dzemwana dzakaita semugomo usina chinhu wakamirira kudirwa zvinhu. Saka vabereki vanofanira kusarudza kuti ivo ndivo here vozadza pfungwa dzevana vavo nedzidziso dzokuti vangazvibata sei uye zvavanofunga kuti zvakanakira vana vavo, kana kuti vorega pfungwa nemwoyo zvevana vavo zvichitutirwa mashoko nevamwewo vanhu.
Zvanga zvichiitika kubva kare zvinoratidza kuti chitendero chinogona kuita kuti vanhu vafungirane zvakaipa uye vavengane. Saka vabereki vangaita sei kuti zvakataurwa naJonathan Swift zvisazopedzisira zvaitika? Vangadzidzisa sei vana vavo dzidziso dzinoita kuti vade vanhu?
Mushonga wacho unogona kuwanikwa kana tikatsvaka mhinduro dzemibvunzo mitatu inotevera: (1) Vana vanofanira kudzidziswei? (2) Ndiani anofanira kuvadzidzisa? (3) Madzidzisiro api anonyatsoita?
^ ndima 11 Mashoko aya akawanikwa pakubvunzurudzwa kwakaitwa vana vanopfuura 21 000 vanogara muUnited States uyewo vabereki vavo nevadzidzisi vavo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vana Vanofanira Kudzidziswa nezvaMwari Here?
w11 8/1 p. 3